568s Post Scriptum - Heelsum လမ်းကာကွယ်ရေး [GER Comms / ENG Subs] images and subtitles
ငါ့ကိုရန်ဘက်ပြုသောသူသည်ငါ့ကိုစုဝေးစေ။ ၊ အချက်အလက်များအနေဖြင့်အချက်များ - အကယ်၍ အချက်သည်ယခုကျလိမ့်မည်ဆိုပါက ... လူတိုင်းချက်ချင်းလာမယ့်အချက်မှဆုတ်ခွာ! ငါအမြောက်တပ်နှင့်အတူအမှတ် hit! ဗိုလ်ကြီးနားလည်ခဲ့ ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းရဲ့အသင်းဖော်တွေကိုပြောပြပါ။ ချီတက်ပွဲယောက်ျားလေးများသတ်မှတ်! မြောင်း၌၎င်း၏မြောက်ဘက်ရန်သူခြေလျင်ရှိပါတယ်! ဟုတ်ပါတယ်၊ အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုရှင်းထုတ်ပြီးအဓိကအချက်ကိုရကြပါစို့။ နေရာတိုင်းချုံ၌! ပွင့်လင်းမျက်စိ, တစ်နေရာရာမှာရန်သူချီတက်ပွဲရှိပါတယ်! ကြည့်ရတာကောင်းပါတယ် - အိုကေ၊ မြောက်ဘက်ကိုကြည့်ရအောင်! ရန်သူအကြံပေးအဖွဲ့၏အရှေ့မြောက်ဘက်, အနောက်မြောက်ဘက်ရွေ့လျား! တော၌စနိုက်ပါ! ဟုတ်တယ်၊ သငျသညျကြားလျှင်, ဆန္ဒပြမှုကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်! သူတို့သည်ငါတို့ကိုမောင်းထုတ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ တောင်ဘက်မှရန်သူခြေလျင်! ဂရုစိုက်ခြင်း, ဆန္ဒပြပွဲနှင့်အမှတ်အကြားလုံခြုံမ! ငါရိုက်တယ် အရှေ့တောင်! အိုကေရပြီ။ တောင်ဘက်ကိုလုံခြုံပါ။ တောထဲသို့ဝင်၊ ညစ်ပတ်ပါစေ! အဆိုပါခြေလျင်ငါ့ကို ammo drop ဘယ်မှာပြောပြနိုင်မလား? ချီတက်ပွဲဆိုတာရှင်းပါတယ် 05? 05 ချက်ချင်းအမှတ်ပေါ်, ကောင်းသောအသံ! ရန်သူများသည်အရှေ့တောင်ဘက်မှဆန္ဒပြပွဲသို့လာကြသည်။ အရှေ့တောင်ဘက်ကိုစောင့်ကြည့်ပါ ဦး ။ အခုချီတက်ပွဲဟာလုံခြုံနေပြီ၊ လှလှပပအဲဒီမှာပြုမိ! ဒီမြောင်းထဲမှာ သူတို့မြောင်းထဲရောက်နေပြီ။ ငါတို့အစောပိုင်းကအနေအထားမှာခြေလျင်တွေအများကြီးရွေ့လျားနေတယ်။ တောင်ဘက် - အရှေ့မြောင်းကိုလုံခြုံအောင်ထားပါ။ ငါတို့တစ်ခုခုတွေ့ပြီ ဟုတ်တယ်၊ မင်းတောင်တောင်၊ နောက်ထပ်အနောက်တောင်ဘက်ဖြစ်သင့်! အဲဒီ asshole ကငါ့ကိုရည်မှန်းနေတယ်။ အရှေ့ဘက်သို့ အရှေ့ကလာ ကျနော်တို့ဘောလုံးကွင်းကိုဖြတ်ပြီးကားမောင်းနေတဲ့ Bren လေယာဉ်တင်သင်္ဘောရှိတယ်။ N 10 မှာခြေလျင်! ယခုခဏနေပါ ဦး ။ အထက်ပိုင်း၌! ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထား၏အရှေ့! Recon အကြံဥာဏ်ကကိုင်တွယ်နိုင်ပါသလား။ မင်းတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုသတိထားပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမှတ်ဘယ်လိုရှာဖွေနေသလဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! Panther ယခုများအတွက်အနားယူနေသည်! နားလည်သဘောပေါက်! ရေဒီယို နယူးချီတက်ပွဲသည်ယောက်ျားလေးများဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့တောင်ဘက်ဒုက္ခရှိသည်! ဒါပေမယ့် recon ကားကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနေတယ်။ ရန်သူခြေလျင်ချီတက်ပွဲ၏မြောက်ဘက်! ငါ့အပေါ်မှာငါ့တပ် - ငါလမ်းတစ်လျှောက်မြောက်ဘက်ရွှေ့! ကျနော်တို့အမှတ်၏အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပိတ်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်! နားလည်သဘောပေါက်! အဲဒီမှာခြေလျင်! သစ်ခေါက်သို့ပြေးသွားလေ၏! မင်းမြောက်ဘက်၊ အနောက်မြောက်ဘက်။ အနောက်မြောက်ခြေလျင်၊ ခြေလျင်တပ်များ၊ အနောက်ဘက်လမ်းပေါ်မှာပဲ။ နားလည်ပါသည်။ တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးကိုသုံးပါ။ သူတို့ကဒီမှာလမ်းနဲ့နီးနေတယ်၊ ​​သတိထားပါ။ အမှတ်ပေါ်သို့ရွေ့လျားထားပါ! သူတို့ကအားဖြည့်ဖို့လိုတယ်။ အဆိုပါအချက်သည်လူလိုက်ပါသည်မဟုတ်! ကျနော်တို့ပြန်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်! ငါတို့အဲဒီမှာရှိတယ် သူတို့ဟာအရှေ့မြောက်အရူးတွေလိုသေကြရတာပါ။ ချက်ချင်းပဲသတိထားပါ။ လက်ပစ်ဗုံးထွက်နေပါပြီ shit ... ဒီမှာအနောက်မြောက်၊ ငါတို့မှာကလူလုံလောက်ပြီ။ ပြဿနာမရှိပါဘူး! နည်းနည်းချင်းစီ! ကျနော်တို့ကနောက်ကျော capping ပေမယ့်တကယ်တဖြည်းဖြည်း! ငါတို့ရပြီဆိုရင်၊ နောက်ကွယ်ကနေ၊ arty west ကိုသုံးပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးအနီးစပ်ဆုံးအမှတ်အသားပေးပါ။ ညွှန်မှတ် set ကိုအနည်းငယ်ပျံ့နှံ့! ကျနော်တို့အမှတ်ပေါ် arty လာပြီ! အနောက်ဘက်အနောက်ဘက်၊ MSP ကိုပြန်ပြီးဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီ။ အလွန်ကောင်းသည်! အမြောက်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးအချင်းဝက်, အမှတ်အသားအပေါ်ဆင်းလာမယ့်! ၁၂ နာရီ ပြီးပြည့်စုံတဲ့! အမှတ်ပေါ်လာမယ့် Arty, အမှတ်အသားအစုံ - အဖုံးကိုယူ! အချင်းဝက်သေးပေမယ့်ဘယ်တော့မှမသိဘူး ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! အဆိုပါ arty ကုန်ပြီပြီးတာနဲ့အချက်အတွက်ရ, အနောက်မြောက်ဘက်ဆီသို့လုံခြုံ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် doc! ကြိုဆိုပါတယ် ကောင်းသောအလုပ်, ကောင်းသောအလုပ်! တောင်ကုန်းနောက်မှာရှိတဲ့မြောင်းငယ်ထဲမှာတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ရပြီ အချက်အပေါ်ရန်သူအမြောက်တပ်! ရန်သူမော်တာဟုတ်တယ်! သူတို့ကဆဲမြောက်ဘက်မော်တာအနေအထားရှိသည်! အဲဒီနေရာမှာသိထားသင့်တဲ့နေရာလား။ မြောက်ဘက်, တစ်နေရာရာလမ်းတစ်လျှောက်! ပွိုင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းယောက်ျားလေးများပါ! ဒီမှာဝင်ပါ။ အဆိုပါကစားသမားများထဲမှထိုအဘို့မိမိတို့ sniper detach လုပ်နိုင်သလား? သွားရှာတွေ့ရင်ငါတို့ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်သလား။ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးငါ့အဘို့အမှတ်အသားရ? လမ်းအနီးတွင်မြောက်ဘက်ခြေလျင်တပ်သားအနည်းဆုံး ၂ ဦး! အကြံပေးလိုသည်မှာ - အမှတ် ၁၅ တွင်ရန်သူ့မော်တာနေရာချထားသည် အဲဒီမှာမော်တာရှိကောင်းရှိမယ်။ အရမ်းမပါရှိပါဘူး လမ်းမကြီးပေါ်တွင်အနောက်မြောက်မှတိုက်ခိုက်မှုအသစ်! လမ်းဘေးမြောင်း, ဘယ်ဘက်ခြမ်း! မြောက်အမေရိက - အနောက်ဘက်၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ မြောင်းကောင်များရှိလမ်း၏ဘယ်ဘက်ခြမ်း။ အဖုံးအနည်းငယ်ယူပါ။ အဖြစ်ကောင်းစွာလမ်း၏ညာဘက်အခြမ်း! သငျသညျအကြှနျုပျကိုအမှတ်အသားရလျှင်ငါ strafing ပြေးပေးပို့နိုင်ပါတယ်! လမ်းခုလတ်မှာ! ကျေးဇူးပြု၍ အနောက်တောင်မှအရှေ့မြောက်အထိ Arty အမှတ်အသားပေးပါ။ ရန်သူမော်တာများကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သည်။ သူတို့ကိုမြောင်းထဲ၌ဖိနှိပ်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုတွင်ဖြတ်သန်းပြေးဆွဲနေပါသည်။ လမ်းတစ်လျှောက်ရွက်လွှင့်ပါ။ လမ်းပေါ်မှာပြေးသွားခြင်း! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! သူတို့ကိုနှိမ်နင်းယောက်ျားလေးများကိုစောင့်ရှောက်! ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မကြာမီသေကြလိမ့်မည်! ကစားသမား Baker hit ရပေလိမ့်မည်! မြောင်းထဲသို့လမ်းတစ်လျှောက်မီးခိုးအချို့လွှင့်ပစ်ပါ။ အဆိုပါ strafing ပြေးငါတို့မှတဆင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်! ချုံထဲမှာအဲဒီမှာတက်! လေယာဉ်တစ်စင်းလားဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလား တစ်ခု ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကောင်းပြီ - ဟိုမှာကျော်ရ! ကြိုဆိုပါတယ် မြောင်းနေဆဲ - သတိထားပါ!
Post Scriptum - Heelsum လမ်းကာကွယ်ရေး [GER Comms / ENG Subs]
hd, frag, 1080p, friday night bomber flight, CloD, Multi, ju87, fw190, jabo, g2, german, freie jagd, guncam, kills, idave1000, zg26, Jg4_karaya, night, bridge, autumn, flak, compilation, 30mm, cinematic, Beule, cliffs of Dover, sheriff686, focke wulf, Online, Battle Of Stalingrad (Military Conflict), Gustav, zerstörer, g14, night fight, bf109, ground attack, karaya, summer, map, TAW, 13mm, me109, 720p, Sommer, Tactical Air War, G6, Herbst, il2, battle of moscow, Kertsch, fnbf, bos, VadeLP, stuka, Kuban, deutsch, vade,
< start="7.46" dur="1.42"> ငါ့ကိုရန်ဘက်ပြုသောသူသည်ငါ့ကိုစုဝေးစေ။ ၊ >
< start="13.72" dur="4.12"> အချက်အလက်များအနေဖြင့်အချက်များ - အကယ်၍ အချက်သည်ယခုကျလိမ့်မည်ဆိုပါက ... >
< start="18.28" dur="5.44"> လူတိုင်းချက်ချင်းလာမယ့်အချက်မှဆုတ်ခွာ! ငါအမြောက်တပ်နှင့်အတူအမှတ် hit! >
< start="24.6" dur="1.12"> ဗိုလ်ကြီးနားလည်ခဲ့ >
< start="26.02" dur="3.72"> ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းရဲ့အသင်းဖော်တွေကိုပြောပြပါ။ >
< start="31.22" dur="5.02"> ချီတက်ပွဲယောက်ျားလေးများသတ်မှတ်! မြောင်း၌၎င်း၏မြောက်ဘက်ရန်သူခြေလျင်ရှိပါတယ်! >
< start="36.78" dur="1.66"> ဟုတ်ပါတယ်၊ အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="39.6" dur="2.26"> သူတို့ကိုရှင်းထုတ်ပြီးအဓိကအချက်ကိုရကြပါစို့။ >
< start="42.46" dur="2"> နေရာတိုင်းချုံ၌! >
< start="45.82" dur="2.36"> ပွင့်လင်းမျက်စိ, တစ်နေရာရာမှာရန်သူချီတက်ပွဲရှိပါတယ်! >
< start="58.5" dur="1.92"> ကြည့်ရတာကောင်းပါတယ် - အိုကေ၊ မြောက်ဘက်ကိုကြည့်ရအောင်! >
< start="60.42" dur="3.04"> ရန်သူအကြံပေးအဖွဲ့၏အရှေ့မြောက်ဘက်, အနောက်မြောက်ဘက်ရွေ့လျား! >
< start="63.46" dur="1.94"> တော၌စနိုက်ပါ! ဟုတ်တယ်၊ >
< start="66.18" dur="2.38"> သငျသညျကြားလျှင်, ဆန္ဒပြမှုကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်! >
< start="68.86" dur="2.7"> သူတို့သည်ငါတို့ကိုမောင်းထုတ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ >
< start="71.62" dur="5.06"> တောင်ဘက်မှရန်သူခြေလျင်! ဂရုစိုက်ခြင်း, ဆန္ဒပြပွဲနှင့်အမှတ်အကြားလုံခြုံမ! ငါရိုက်တယ် >
< start="76.92" dur="2.66"> အရှေ့တောင်! အိုကေရပြီ။ တောင်ဘက်ကိုလုံခြုံပါ။ >
< start="79.58" dur="1.78"> တောထဲသို့ဝင်၊ ညစ်ပတ်ပါစေ! >
< start="81.44" dur="3.7"> အဆိုပါခြေလျင်ငါ့ကို ammo drop ဘယ်မှာပြောပြနိုင်မလား? >
< start="85.26" dur="2.88"> ချီတက်ပွဲဆိုတာရှင်းပါတယ် >
< start="88.66" dur="1.04"> 05? >
< start="91.78" dur="3.98"> 05 ချက်ချင်းအမှတ်ပေါ်, ကောင်းသောအသံ! ရန်သူများသည်အရှေ့တောင်ဘက်မှဆန္ဒပြပွဲသို့လာကြသည်။ >
< start="101.1" dur="3.34"> အရှေ့တောင်ဘက်ကိုစောင့်ကြည့်ပါ ဦး ။ >
< start="105.74" dur="2"> အခုချီတက်ပွဲဟာလုံခြုံနေပြီ၊ >
< start="117.42" dur="3.24"> လှလှပပအဲဒီမှာပြုမိ! ဒီမြောင်းထဲမှာ သူတို့မြောင်းထဲရောက်နေပြီ။ >
< start="120.66" dur="4.56"> ငါတို့အစောပိုင်းကအနေအထားမှာခြေလျင်တွေအများကြီးရွေ့လျားနေတယ်။ တောင်ဘက် - အရှေ့မြောင်းကိုလုံခြုံအောင်ထားပါ။ >
< start="135.92" dur="3.6"> ငါတို့တစ်ခုခုတွေ့ပြီ ဟုတ်တယ်၊ မင်းတောင်တောင်၊ >
< start="140.36" dur="1.8"> နောက်ထပ်အနောက်တောင်ဘက်ဖြစ်သင့်! >
< start="146.98" dur="4.32"> အဲဒီ asshole ကငါ့ကိုရည်မှန်းနေတယ်။ အရှေ့ဘက်သို့ အရှေ့ကလာ >
< start="152.44" dur="4.66"> ကျနော်တို့ဘောလုံးကွင်းကိုဖြတ်ပြီးကားမောင်းနေတဲ့ Bren လေယာဉ်တင်သင်္ဘောရှိတယ်။ N 10 မှာခြေလျင်! >
< start="157.5" dur="3.66"> ယခုခဏနေပါ ဦး ။ အထက်ပိုင်း၌! >
< start="161.94" dur="3.1"> ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထား၏အရှေ့! >
< start="165.82" dur="2.44"> Recon အကြံဥာဏ်ကကိုင်တွယ်နိုင်ပါသလား။ >
< start="168.7" dur="2"> မင်းတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုသတိထားပါ။ >
< start="174.58" dur="0.96"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="184.54" dur="2"> အမှတ်ဘယ်လိုရှာဖွေနေသလဲ >
< start="187.2" dur="1.36"> ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! >
< start="194.72" dur="2.54"> Panther ယခုများအတွက်အနားယူနေသည်! >
< start="198.68" dur="1.1"> နားလည်သဘောပေါက်! >
< start="203.38" dur="2"> ရေဒီယို >
< start="208.32" dur="2"> နယူးချီတက်ပွဲသည်ယောက်ျားလေးများဖြစ်သည်။ >
< start="212.78" dur="3.06"> ကျနော်တို့တောင်ဘက်ဒုက္ခရှိသည်! ဒါပေမယ့် recon ကားကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနေတယ်။ >
< start="218.24" dur="4.36"> ရန်သူခြေလျင်ချီတက်ပွဲ၏မြောက်ဘက်! ငါ့အပေါ်မှာငါ့တပ် - ငါလမ်းတစ်လျှောက်မြောက်ဘက်ရွှေ့! >
< start="222.6" dur="2.08"> ကျနော်တို့အမှတ်၏အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပိတ်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်! >
< start="225.86" dur="1.3"> နားလည်သဘောပေါက်! အဲဒီမှာခြေလျင်! >
< start="227.2" dur="3.28"> သစ်ခေါက်သို့ပြေးသွားလေ၏! မင်းမြောက်ဘက်၊ အနောက်မြောက်ဘက်။ >
< start="230.48" dur="3.16"> အနောက်မြောက်ခြေလျင်၊ ခြေလျင်တပ်များ၊ >
< start="234.76" dur="2.8"> အနောက်ဘက်လမ်းပေါ်မှာပဲ။ နားလည်ပါသည်။ >
< start="239.82" dur="2"> တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။ >
< start="242.64" dur="2.56"> နှစ်ဖက်စလုံးကိုသုံးပါ။ >
< start="245.32" dur="1.94"> သူတို့ကဒီမှာလမ်းနဲ့နီးနေတယ်၊ ​​သတိထားပါ။ >
< start="269.96" dur="3.3"> အမှတ်ပေါ်သို့ရွေ့လျားထားပါ! သူတို့ကအားဖြည့်ဖို့လိုတယ်။ အဆိုပါအချက်သည်လူလိုက်ပါသည်မဟုတ်! >
< start="273.52" dur="1.66"> ကျနော်တို့ပြန်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်! >
< start="276.5" dur="1.34"> ငါတို့အဲဒီမှာရှိတယ် >
< start="287.92" dur="2"> သူတို့ဟာအရှေ့မြောက်အရူးတွေလိုသေကြရတာပါ။ >
< start="290.56" dur="1.7"> ချက်ချင်းပဲသတိထားပါ။ >
< start="293.08" dur="1.42"> လက်ပစ်ဗုံးထွက်နေပါပြီ >
< start="295.88" dur="0.92"> shit ... >
< start="298.12" dur="1.3"> ဒီမှာအနောက်မြောက်၊ >
< start="300.12" dur="3.28"> ငါတို့မှာကလူလုံလောက်ပြီ။ ပြဿနာမရှိပါဘူး! >
< start="303.9" dur="1.98"> နည်းနည်းချင်းစီ! >
< start="315.34" dur="2"> ကျနော်တို့ကနောက်ကျော capping ပေမယ့်တကယ်တဖြည်းဖြည်း! >
< start="318.28" dur="3.04"> ငါတို့ရပြီဆိုရင်၊ နောက်ကွယ်ကနေ၊ arty west ကိုသုံးပါ။ >
< start="322.8" dur="2"> ကျေးဇူးပြုပြီးအနီးစပ်ဆုံးအမှတ်အသားပေးပါ။ >
< start="329.72" dur="2"> ညွှန်မှတ် set ကိုအနည်းငယ်ပျံ့နှံ့! >
< start="334.8" dur="4.08"> ကျနော်တို့အမှတ်ပေါ် arty လာပြီ! အနောက်ဘက်အနောက်ဘက်၊ >
< start="341.98" dur="3.24"> MSP ကိုပြန်ပြီးဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီ။ အလွန်ကောင်းသည်! >
< start="346.4" dur="4"> အမြောက်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးအချင်းဝက်, အမှတ်အသားအပေါ်ဆင်းလာမယ့်! ၁၂ နာရီ ပြီးပြည့်စုံတဲ့! >
< start="350.46" dur="2.74"> အမှတ်ပေါ်လာမယ့် Arty, အမှတ်အသားအစုံ - အဖုံးကိုယူ! >
< start="353.42" dur="1.52"> အချင်းဝက်သေးပေမယ့်ဘယ်တော့မှမသိဘူး >
< start="355.82" dur="1.46"> ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! >
< start="359.78" dur="3.76"> အဆိုပါ arty ကုန်ပြီပြီးတာနဲ့အချက်အတွက်ရ, အနောက်မြောက်ဘက်ဆီသို့လုံခြုံ! >
< start="364.54" dur="1"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ် doc! >
< start="367.42" dur="1.24"> ကြိုဆိုပါတယ် >
< start="384.48" dur="3.62"> ကောင်းသောအလုပ်, ကောင်းသောအလုပ်! တောင်ကုန်းနောက်မှာရှိတဲ့မြောင်းငယ်ထဲမှာတစ်ယောက်ရှိတယ်။ >
< start="389.26" dur="1.26"> ရပြီ >
< start="397.62" dur="1.98"> အချက်အပေါ်ရန်သူအမြောက်တပ်! >
< start="399.6" dur="3.1"> ရန်သူမော်တာဟုတ်တယ်! သူတို့ကဆဲမြောက်ဘက်မော်တာအနေအထားရှိသည်! >
< start="405.46" dur="1.76"> အဲဒီနေရာမှာသိထားသင့်တဲ့နေရာလား။ >
< start="408.52" dur="2"> မြောက်ဘက်, တစ်နေရာရာလမ်းတစ်လျှောက်! >
< start="419.22" dur="2"> ပွိုင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းယောက်ျားလေးများပါ! ဒီမှာဝင်ပါ။ >
< start="423.86" dur="3.22"> အဆိုပါကစားသမားများထဲမှထိုအဘို့မိမိတို့ sniper detach လုပ်နိုင်သလား? >
< start="428.46" dur="2"> သွားရှာတွေ့ရင်ငါတို့ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်သလား။ >
< start="432.66" dur="2.48"> သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးငါ့အဘို့အမှတ်အသားရ? >
< start="438.98" dur="4.28"> လမ်းအနီးတွင်မြောက်ဘက်ခြေလျင်တပ်သားအနည်းဆုံး ၂ ဦး! >
< start="446.78" dur="4.14"> အကြံပေးလိုသည်မှာ - အမှတ် ၁၅ တွင်ရန်သူ့မော်တာနေရာချထားသည် >
< start="450.92" dur="2.82"> အဲဒီမှာမော်တာရှိကောင်းရှိမယ်။ အရမ်းမပါရှိပါဘူး >
< start="461.52" dur="2.44"> လမ်းမကြီးပေါ်တွင်အနောက်မြောက်မှတိုက်ခိုက်မှုအသစ်! >
< start="463.96" dur="1.7"> လမ်းဘေးမြောင်း, ဘယ်ဘက်ခြမ်း! >
< start="467.06" dur="3.66"> မြောက်အမေရိက - အနောက်ဘက်၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ မြောင်းကောင်များရှိလမ်း၏ဘယ်ဘက်ခြမ်း။ >
< start="470.88" dur="2"> အဖုံးအနည်းငယ်ယူပါ။ အဖြစ်ကောင်းစွာလမ်း၏ညာဘက်အခြမ်း! >
< start="472.88" dur="2.48"> သငျသညျအကြှနျုပျကိုအမှတ်အသားရလျှင်ငါ strafing ပြေးပေးပို့နိုင်ပါတယ်! >
< start="476.2" dur="1.32"> လမ်းခုလတ်မှာ! >
< start="487.06" dur="3.32"> ကျေးဇူးပြု၍ အနောက်တောင်မှအရှေ့မြောက်အထိ Arty အမှတ်အသားပေးပါ။ >
< start="491.14" dur="1.82"> ရန်သူမော်တာများကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သည်။ >
< start="494.7" dur="3.56"> သူတို့ကိုမြောင်းထဲ၌ဖိနှိပ်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုတွင်ဖြတ်သန်းပြေးဆွဲနေပါသည်။ >
< start="499.8" dur="1.86"> လမ်းတစ်လျှောက်ရွက်လွှင့်ပါ။ လမ်းပေါ်မှာပြေးသွားခြင်း! >
< start="501.66" dur="1.18"> ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! >
< start="504.46" dur="2.72"> သူတို့ကိုနှိမ်နင်းယောက်ျားလေးများကိုစောင့်ရှောက်! ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မကြာမီသေကြလိမ့်မည်! >
< start="515.88" dur="2"> ကစားသမား Baker hit ရပေလိမ့်မည်! >
< start="520.52" dur="3.38"> မြောင်းထဲသို့လမ်းတစ်လျှောက်မီးခိုးအချို့လွှင့်ပစ်ပါ။ >
< start="523.9" dur="2.38"> အဆိုပါ strafing ပြေးငါတို့မှတဆင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်! >
< start="532.24" dur="1.44"> ချုံထဲမှာအဲဒီမှာတက်! >
< start="534.1" dur="1.36"> လေယာဉ်တစ်စင်းလားဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလား >
< start="536.8" dur="1.5"> တစ်ခု ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="538.3" dur="1.46"> ကောင်းပြီ - ဟိုမှာကျော်ရ! >
< start="539.94" dur="1.14"> ကြိုဆိုပါတယ် >
< start="564.22" dur="2"> မြောင်းနေဆဲ - သတိထားပါ! >